Indlu ephantsi kwedolophu epholileyo (13km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseNoi Bai)
Siyakwamkela zonke iintsapho ezincinci, okanye abo bafuna indawo enokuthula kwi-suburb yaseHanoi (ephakathi kweVietnam). Kukho amasimi erayisi, iilali ezindala, iipagoda ezindala, iitempile ezindala, kunye ne-ecopark ejikelezileyo, sikwanayo nokutya okunempilo kwemifuno yonke imihla.
Ukuba uyafuna ukubhukisha, ndicela undithumelele imiyalezo kwangethuba, kuba ndim ndedwa ekhaya okwaziyo ukuthetha isilungu, kwaye ndiza kukubonisa indlela yokuya kwam.
Sinezixhobo zasekhitshini ezaneleyo ukuze upheke into oyifunayo (ngaphandle kwemicrowave).
Sikwanazo nezidlo zemifuno rhoqo, kunye nemifuno esiyilimayo yodwa (kanye phambi kwekhaya lethu), kwaye sipheka ngokucokisekileyo ukuze sikhuphe izinto ezingacocekanga, ngoko akufuneki ukhathazeke ukuba uyi vegan enononophelo.
Akukho bantu baninzi njengesixeko esikhulu iHanoi, Kuzolile ngokupheleleyo, kunoxolo. Umoya umtsha. Kodwa isenokukruqula ngamanye amaxesha ukuba uqhelene nesixeko esixakekileyo, esinengxolo.
Kuya kufuneka uhambe okanye ukhwele kancinci ukuya epakini, imarike, okanye ivenkile yeencwadi, ..
Asikokuzibaxa izinto ukuthi umama ngoyena mntu unobuhlobo wakha wadibana ^^ , ingakumbi kubantu basemzini.
Undixelele ukuba anganinceda nifumanise okungqongileyo, kwaye anizihluphi malunga nokupheka yonke imihla okanye nithenge izinto eziqhelekileyo ezizisikhumbuzo ngexabiso eliphezulu (kuba 'sinithengela yona).
Ukuba kukho into oyifunayo, vele ukhululeke ukubuza.
Undixelele ukuba anganinceda nifumanise okungqongileyo, kwaye anizih…